An-tserasera amin’ny ny ankizivavy fitia Video Mampiaraka USA
Mba manadala ankizilahy miaraka amin’ny ankizivavy online tena sarotra ny lalana dia mba manadala ankizilahy. Hafatra mety ho diso fandray, Hatsikana mety ho very ary mety hiafara amin’ny loza. Ny fitaovana tsara sy ny fahatakarana an-Tserasera dia mety ho Mpanadala amin’ny zazavavy tsara sy hitarika bebe kokoa ny fifandraisana sy ny Daty. Tsy maintsy manana fahatokian-tena mba handresy ny saina ny ankizivavy iray, ary raha fantatrareo ny zavatra ataonareo, dia mitondra anao dingana iray akaikikaiky kokoa ny tanjona. Mba manadala ankizilahy miaraka amin’ny ankizivavy online tena sarotra ny lalana dia mba manadala ankizilahy. Hafatra mety ho diso fandray, Hatsikana mety ho very ary mety hiafara amin’ny loza. Ny fitaovana tsara sy ny fahatakarana an-Tserasera Mpanadala ny ankizivavy mandeha tsara sy hitarika bebe kokoa ny fifandraisana sy ny Daty. Tsy maintsy manana fahatokian-tena mba handresy ny saina ny ankizivavy iray, ary raha fantatrareo ny zavatra ataonareo, dia mitondra anao dingana iray akaikikaiky kokoa ny tanjona. Misy ankehitriny ny am-polony online Mampiaraka toerana, izay no antony hanaovana fikarohana momba ny tsirairay sy ny avy eo mifidy ny iray izay tena tiany ny zavatra ilaina. Fikarohana iray izay mifantoka amin’ny sokajin-taona, ny Finoana, ary ny toetry ny fifandraisana sy ny tiana karazana mpikambana (maimaim-poana na vola). Malaza an-Tserasera Mampiaraka toerana, Fiarahana Amerikana, Parship, Mpanadala, Mampiaraka USA Lalao.
Mamaly fanontaniana momba ny tenanao amim-pahatsorana, satria ny algorithm ny vohikala afaka mahita ny zazavavy fa ny tsara indrindra mendrika ho anao. Haino aman-jery sosialy eo amin’ny fiaraha-monina lasa mampino malaza, ary izany dia matetika ny raharaha izay olona manadala ankizilahy misy sy ny fifandraisana. Manapa-kevitra na tsia ny mombamomba ny sary dia tokony hisy-panjakana na tsy miankina. Raha toa ka tsy miankina, dia mety hahakivy ny zazavavy mba ho ao amin’ny fifandraisana miaraka aminao. Mitady Tenifototra na vondron’olona izay manana ny tombontsoa hita taratra, mba hahita ny ankizivavy mitovy ny tombontsoa. Manolotra anareo, raha manoratra ny Fotoana voalohany an-tserasera amin’ny ny zazavavy, ka dia ho fantatrao fa ianao liana tao amin’ny. Mba manadala ankizilahy an-Tserasera sy tsy any amin’ny tahirin-kevitra dia afaka mahatsapa ho toy ny ho an’ny maro ny vehivavy, tsy mahazo aina ary mampidi-doza, indrindra fa rehefa mahalala ny olona ianao ny miresaka, raha ny marina. Valiny fotoana mety tsara, raha toa izy ka tonga indray ianao. Haingana ny valiny dia mety manana fihetseham-po ianao mazoto loatra, raha miandry ela loatra, mihevitra izy, angamba, ianao very tombontsoa. Tsara dia valio, raha azo atao ao anatin’ny ora vitsivitsy. Hifantoka amin’ny mahafantapantatra hoe iza izy ary ny fomba ny maha-izy azy. Raha manontany azy ireo ny momba ny bika aman’endriny, na ny hita maso angataho izy mba handefa sary azy, dia mahatonga fahatsapana diso momba ny antony, izay anao amin’ny fanoratana. Aza avy hatrany ny Daty na ny Fihaonana manokana. Izany ihany koa no mahatonga ny fahatsapana diso sy mitondra mety ho eo fotsiny izy manoratra. Amin’ny tsara indrindra, dia hahazo ny manana, fara fahakeliny, roa andro. Tohizo ny resaka momba ny fomba be dia miresaka momba ny tenanao, voalanjalanja. Mamaly ny fanontaniana momba anao, ary izy no hitarika ny resaka, raha azo atao. Ho mahalala fomba sy mampihomehy rehefa tsy mety. Aza matahotra ny manao vazivazy izay hitanao mampihomehy, satria ny vintana gutstehen fa izy mahita anao mampihomehy ihany koa. Mifantoka amin’ny resaka izany, mba hahazoanareo mianatra ny mahalala anao tsara kokoa. Lazao amim-pahatsorana sy tamim-panajana, ny zavatra tsapanao sy mieritreritra, ary miezaka ny tsy miteraka resabe lohahevitra. Izany dia mety hitarika ny tsy fitovian-kevitra sy traikefa ratsy. Izany afaka manome ny fahatsapana fa ny zavatra ratsy liana. Ireto, ohatra, ny lohahevitra firaisana ara-nofo. Ireto misy ohatra ny fanontaniana tokony tsy mangataka nandritra ny filalaovana fitia, ary mahafantatra ny hafa. Mampiasa ny marina ny fomba fanoratra sy ny fitsipi-pitenenana ho ny tsara indrindra ny Fahalalana sy ny finoana. Tsy voatery ho tonga lafatra, fa ny ezaka dia mariky ny fahamatorana sy fandraisana andraikitra.
Ataovy ny marina mari-marika
Angamba izy milaza zavatra tianao na mampihomehy mahita, fa tokony ho amin’ny faran’ny ny valiny mihoatra ny iray kiaka marika an-tsoratra. Maro loatra ny Smileys dia afaka mihevitra fa tsy milaza na inona na inona manan-Danja, na koa ianao hanimba zavatra fotsiny ianao hoy izy. Tsy araka ny inoan’ny, Smileys dia ilaina mba hanampiana ny olona hahatakatra ny fihetseham-po na finiavana ny hafatra. Eritrereto ny toro-hevitra etsy ambony mikasika ny malagasy sy ny Smileys. Capitalization, na be loatra ny tsoraka hevitra, ohatra, mety ho toy ny nikiakiaka ho raisina. Tsy sangisangy ao an-Tserasera Chats. Izy angamba no diso adika, raha esoeso dia tsy ampiasaina amin’ny Aterineto Chats amin’ny olona fantatrao tsara. Aza mihevitra fa ny Olona mahafantatra ny tsirairay ny foto-kevitra. Best anontanianao izy raha mahalala izany, ary afaka manazava azy io, raha fantatrao izany. Ny tovovavy tahaka ny fandraisana ho mpikambana izay liana ianao amin’ny azy, ary bebe kokoa ny fifandraisana rehefa avy manana ny hafatra, na any amin’ny efitra hifampiresahana voasoratra, manome azy ireo fandraisana ho mpikambana. Mandefa hafatra fohy mba aoka fantatrao fa ianao mbola mieritreritra ny momba anao sy ny maro hafa ny valiny dia, raha manam-potoana ianao, dia ianao fotsiny ny be sy nandritra ny fotoana sasany, tsy afaka ny tsy hamaly. Raha miezaka ianao mba hanoratra ny fotoana maro amin’ny zazavavy iray ihany tao amin’ny efitra amin’ny chat, avy eo dia mitady ny mpampiasa ny anarany. Tsy fanontaniana, raha tianao, ny adiresy E-Mail, hahazoana antoka ny tsy miankina sy ny lava-teny mifandray. Mpanadala online miaraka aminao mandra-aina ampy mba hitondra ny fifandraisana an-tserasera amin’ny manaraka Mba hitondra Sehatra. Mifidy ny toerana ho an’ny daholobe, rehefa mihaona amin’ny olona ianao, miaraka amin’ilay tovovavy (ao amin’ny Online chat room olona rehetra manerana izao tontolo izao), noho izany dia mahatsiaro ho mahazo aina. Sakafo hariva mahatsapa ho toy ny voalohany Daty ho an’ny vehivavy sasany mampatahotra, izay no mahatonga ny Daty ny tolakandro mety ho toa azy io angamba tsaratsara kokoa. Mifidy ny hialana sasatra amin’ny asa fa tsy nampiasa na inona na inona fanerena amin’ny Daty voalohany. Ny fampisehoana ny Tarika ao amin’ny manodidina, na ny tanimanga eny an-tsena tolotra zavatra izay afaka mifantoka amin’ny ny lamina apetraky ny fanerena ny resaka mitohy. Mahazo ny tolo-kevitra sy ny hevitra ho an’ny ny Daty. Asehoy azy fa tsy tahaka ny lahatsoratra sy mankasitraka ary hanome azy fiarovana. Hanome azy fotoana bebe kokoa, raha ianao ho zava-dehibe niahy azy, ary tsy mety ny voalohany fangatahana ho amin’ny Daty, satria izy mbola mahatsiaro tsy mahazo aina. Raha toa ka aoka ianao fotoana bebe kokoa mba hitsena anao ka mahatonga anao hahatsiaro ho tsara, mikasika ny Daty, raha toa izy hatramin’izao. Soso-kevitra mialoha ny resaka manokana amin’ny alalan’ny Paositra na amin’ny alalan’ny fifanakalozana an-telefaonina ny isa sy ny avy eo amin’ny alalan’ny SMS na antso an-telefaonina hanohy. Noho izany dia afaka mifandray ao ny fomba vaovao amin’ny azy sy manampy azy hahatsapa kokoa ny aina. Asehoy azy fa ianao no eo, miandry, dia hanohy ny fanoratana, dia mizara ny fiainana sy ny tantara liana amin’ny, ary hanam-paharetana.
Izany no zava-dehibe fa ny zazavavy mianatra ny tena fantatro fa tsy ny Olona mihevitra ianao fa te. Fahatakarana feno, raha toa ka ny fifandraisana sy ny tsirairay ny valinteny ny fotoana ilaina. Izy azy manokana ny fiainana ary mety ny Asa, ary raha liana izy, dia hamaly anao izy, rehefa manana fotoana
← Tsy isalasalana fa ny fifandraisana. Eto dia porofo fa tsy maintsy hita ny Marina HuffPost Alemaina
Mampiaraka maimaim-poana →